Saddex sano kadib, Waa sidee wax soo saarka Malabka Saafiga ah ee Yaman? – Shabakadda Amiirnuur
Saddex sano kadib, Waa sidee wax soo saarka Malabka Saafiga ah ee Yaman?
August 9, 2018 3:01 pm by admin Views: 52
Dalka Yaman waxa uu kamid yahay wadamada ugu soo saarka badan Malabka saafiga ah ee aadka qaaliga ah, waxaana astaantaas uu lahaa hoos u dhigay dagaalka saddex sano jirsaday ee dalkaas ku dhexmaraya dowladaha Carbeed iyo malleeshiyaadka Xuuthiyiinta.
Dadka barbaariya shinada soo saarta malabka waxay maraan halis badan oo khatar gelin karta noloshooda, waxaana marar badan qabsaday duqeymo diyaaradeed oo ay fuliyeen diyaaradaha Isbaheysiga.
Waxay halistaas u maraan si ay ugu suuragasho iney soo saaraan mid kamid ah malabka ugu qaalisan, uguna saafisan aduunka oo idil.
Halkii Kiilogaraam ee Malabka laga sameeyey geedka As-sadar waxa uu Yaman ka yahay 100 doollar, halka kuwa dhex-dhexaadka ah tayo ahaan lagu kala iibsado 68 doollar, meelaha Yaman ka baxsan ee loo iibgeeya malabkaasna waxaa lagu kala iibsadaa halkii kiilogaraam 180 doollar.
Midowga ururka Malableeyada ee dalka Yaman ayaa sheegaya in Yaman saddex sano kahor ay sanadkiiba laga dhoofin jiray malab gaaraya 50 kun oo tan oo malab, balse hadda uu hoos u dhacay 50%( kontol boqolkiiba) dhoofinta malabka laga sameeyo geedka As-sadar oo sidoo kale loo yaqaano Al-cunnaab.
Cabdullaahi Yariim oo madax ka ah mu’assasada qaabilsan horumarinta Shinada iyo wax soo saarkeeda oo la hadlay Aljazeera ayaa shaaca ka qaaday in howlgallada Isbaheysiga carbeed uu ka wado Yaman ay saameyn ku yeesheen wax soo saarkooda, islamarkaana jirin goobo laga dhoofiyo malabka.
“Dhamaan marinadii wax laga dhoofin lahaa way xiranyihiin, waxaa furan oo keliya hal marin oo ah Al-wadiica, haddii aad rabto inaad Malab u dirto Malayziya ama Turkiga waxaa waajib ah inaad marsiiso Sucuudiga, taasina waa mushkilad sare u qaaday qarashka ku baxaya Malabka” ayuu yiri Cabdullaahi Yariim.
Mid kamid ah ganacstada Yamaniyiinta ee ka ganacsada Malabka, ayaa isna dhankiisa wuxuu sheegayaa iney hoos u dhacday iibsiga Malabka, maadaama si guud dhaqaalaha dalka Yaman uu hoos u dhacay.
Isagoo hadlaya wuxuu yiri “Wax Iibsashada aad iyo aad ayay u yaraatay, sababtoo ah majirto dakhli fiican oo dadka soo gala, waxaan dhihi karaa 75% (todobaatan iyo shan boqolkiiba) hoos ayuu u dhacay wax iibsashada.